Wasiir JAMAL Oo Weerar Ku Qaaday Deni, Shaaciyeyna Qorshe Uu Damacsan ...
Wasiir JAMAL oo weerar ku qaaday Deni, shaaciyeyna qorshe uu damacsan …
Muqdisho (Wararka Maanta) – Wasiirka Qorsheynta xukuumadda xil-gaarsiinta Jamaal Maxamed Xasan oo qoraal soo dhigay bartiise Twitter-ka ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Wasiir Jamaal oo ka mid ah wasiirada sida weyn ugu dhow madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu yahay musharax u taagan tartanka xilka madaxweynimo ee Soomaaliya oo la filayo inuu dhaco 10-ka October 2021.
Jamaal ayaa sheegay in madaxeyne Deni uu dib u dhigay shaacinta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya islamarkaana uu qorsheenayo inuu faragelin ku sameeyo doorashada xildhibaanada ee ka dhaceysa Puntland, sida uu hadalka u dhigay.
“Maadama uu yahay musharax madaxweyne, Siiciid Deni waa inuu faraha kala baxaa dhammaan arrimaha la xiriira doorashada, oo uu si degdeg ah u joojiyaa faragelinta arrimaha guddiyada farsamada doorashada. Mar dambe aamusnaan kuma daawan karno faragelinta qaawan iyo dhaawaca loo geysanayo dimuqraadiyadda iyo kalsoonidii maamulka Puntland,” ayuu wasiir Jamaal ku yiri qoraalka uu soo dhigay Twitter-ka.
“Saciid Abdullahi Deni wuxuu dib u dhigay ku dhawaaqista musharaxnimadiisa si uu saameyn ugu yeesho, una farageliyo doorashooyinka ka dhacaya Puntland. Odayaasha beelaha, wakiillada iyo musharixiinta baarlamaanka ayaa dhammaantood muujiyey walaac weyn oo ku saabsan heerka ay gaarsiisan tahay wax is daba marinta, cagajugleynta iyo faragelinta uu wado Deni,”
Hadalka kasoo yeeray Wasiir Jamaal ayaa kusoo aadayo xilli uu socdo loolan adag oo u dhaxeeyo xildhibaanada taageersan madaxweyne Farmaajo ee kuraastooda ay taallo deegaanada Puntland iyo madaxweyne Saciid Deni oo saameyn xoog leh ku leh doorashada xildhibaanada.
Saciid Deni ayaa xoogiisa isugu geynayo sidii uu meesha uga saari lahaa xildhibaanada taageersan madaxweyne Farmaajo ee kasoo jeedo Puntland, kuwaas oo afartii sano ee lasoo dhaafay ka shaqeenayey danaha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday.
Wasiirada kale ee sida weyn ee taageero madaxweyne Farmaajo isla markaasna kuraastooda xildhibaanimo ay taalo Puntland waxaa kamid ah Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Cabdullahi Bidhaan Warsame iyo Wasiir ku xigeenka Maaliyadda Maxamud Xayir Ibraahim.
Wararka Maanta : Daawo: Nin Imaam Masjid ahaan jiray oo Muqdisho loogu maxkamadeynayo d...